Homeसमाचारकिशोर र लक्ष्मी प्र’कारणको खेलाडी को ? लक्ष्मीलाई झु’ ट बोल्न लाउने दुलही बनाएर रु न लाउने को हो ? भयो प’र्दाफास (हे’र्नुहोस भिडियो)
April 23, 2021 admin समाचार 5660
नायक किशोर खतिवडा र लक्ष्मी गदाल प्र’कारण नयाँ मोडमा पुगेको छ चलचित्रको का’हानी जस्तै । चलचित्र रावण मार्फत नेपाली रज’तपटमा प्रवेश गरेका कलाकार किशोर खतिवडा माथि लक्ष्मी गदालले श्रीमान दावी गर्दै अहिले धो’ का दिएको बताएकी थिइन । उनले मिडियामा सो कुरा सार्वजनिक गरेपछि किशोर पनि सार्व’जनिक भएका थिए ।
कलाकार खतिवडाले बिगत ३ वर्षदेखि बि’वाहको आ श्वासन दिएर आफुलाई प्रयोग गरेर लाखौं र’कम समेत लगेको आरोप लक्ष्मी गदालले लगाएकी थिइन । तीन वर्ष सम्म श्रीमान श्रीमती जस्तै बसेका उनीहरुबीच सम्बन्धमा स’ मस्या आएको थियो । भोजपुर घर बताउने लक्ष्मी गदालले खतिवडालाई श्रीमान दावी गर्दै आफुलाई अ न्याय गरेको आ’रोप लगाएकी थिइन ।
तर अहिले त्यो कुरा बाट मुख मो’डेकी छिन लक्ष्मीले । मैले ग लत गरेछु आफ्नो माया गर्ने मान्छेलाई कसैले उ’चालेको भरमा भनेकी छिन लक्ष्मीले । आहिले यही बिषयमा पुन्य गौतमले आफ्नो मु’ख खोलेका छन हेरौ उनको बिचा’र भिडियोमा – इताजा खबरबाट
April 19, 2021 admin समाचार 5578
March 22, 2021 admin समाचार 5427
March 17, 2021 admin समाचार 6778